Ọkachamara Semalt na-akọwa 12 Ụdị nke WordPress saịtị Ị nwere ike mfe kere
WordPress nwere ike ịbụ usoro nchịkọta blog na ike na njikwa ọdịnaya dị na ụlọ ahịa ahịa taa. Maka afọ ole na ole gara aga, WordPress malitere ịghọ ihe ngosi dịka ngwá ọrụ kachasị mfe iji mee ihe mgbe ọ na-abịa n'ịmepụta blọọgụ. Ugbu a, WordPress na-eji ọtụtụ iri nde ndị na-azụlite na ndị na-azụ ahịa ahịa na-emepụta weebụsaịtị sitere na saịtị ọkachamara na blọọgụ nkeonwe.
N'oge a, ntaneti akụkọ, blọọgụ ndị na-ewu ewu, na ebe nrụọrụ weebụ na-egwu egwu na-eji WordPress iji kụọ ahịa ahịa ha n'oge - kanger protank coils. N'ahịa ahịa, saịtị ndị WordPress na-ahọrọ dị ka ihe kacha mma.
Oliver King, onye ọkachamara ọkachamara si Semalt , na-enye ebe a ndepụta nke ụdị 12 nke weebụsaịtị ị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa iji WordPress.
1. E-azụmahịa weebụsaịtị
WordPress gụnyere nke zuru oke plugins na elu-edu gburugburu iji mepụta weebụ bara uru e-azụmahịa. Otu weebụsaịtị E-azụmahịa site na WordPress nwere ihe ndị dị egwu na-enyere ndị ahịa aka ijikwa akụrụngwa ma gbakwunye ụgbọ ibu azụmahịa. Ebe nrụọrụ weebụ na-akwado ikwado nzipu na ịnweta ego site na saịtị.
2. Ụlọ ọrụ azụmahịa
Ị na-arụ ọrụ na ịmepụta ndekọ ego? WordPress bụ ngwá ọrụ kachasị mma maka gị. Jiri uru WordPress rụọ ụlọ ọrụ azụmahịa ma nweta ohere ịgbakwunye nkọwa azụmahịa gị ma tinye njikọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Saịtị WordPress na-enye ndị ọbịa ohere ịchọta site n'ọtụtụ ahịa.
3. Udiana website Wiki
Jiri nlezianya jikwaa ọdịnaya gị site n'ịmepụta mkpokọta gị site na iji WordPress. N'ịbụ nke a maara dị ka ebe nrụọrụ weebụ knowledgebase, ebe nrụọrụ weebụ wiki na-achọ njikọ na-esote na akwụkwọ na posts. WordPress na-enye ndị ọkà mmụta ohere iji categorize ọdịnaya site na iji akara na edemede.
4. Obodo ndị dabeere na kọmputa
Jiri WordPress iji wulite ebe ịntanetị dabeere na isiokwu ị maara nke ọma. Nwee ohere ịkọrọ ndị ọbịa gị ọdịnaya gị. Jiri akwukwo ndi nlere iji mepụta listi ozi-e nke kwuru na ihe di n'ime gi..Saịtị WordPress na-enye ndị ọbịa ohere ịza ajụjụ na saịtị gị dị mfe.
5. Nnyocha weebụsaịtị
Jiri WordPress iji mepụta ebe nrụọrụ weebụ ma nweta ohere iji tinye ihe onwunwe ndị nwere ikike dị iche iche. Nye ndị nkụzi na ndị ọkà mmụta ihe ntinye aka iji dozie ma tinye ọdịnaya bara uru na saịtị gị.
6. Mgbasa ozi weebụsaịtị
Ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-ejikọta mgbasa ozi na-ejikarị mara ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na niche. Site na ịmepụta weebụsaịtị ndị mmekọ na-eji WordPress, ị nwere ike ịnweta ụyọkọ ego site na ịme ezigbo ụgbọala gaa na saịtị gị. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọbịa nwere ike ịkwụsị ịzụ ngwaahịa ndị a tụlere na nke gị.
7. Ebe nrụọrụ weebụ Pọtụfoliyo
Ka ngwaahịa gị, imepụta ya, na nkà gị na-agwa gị okwu. Ebe nrụọrụ weebụ WordPress gụnyere gburugburu na atụmatụ ndị na-enye ndị na-ese ihe ohere igosipụta ike ha nye ndị ọbịa.
8. Ụlọ Ọrụ Obodo
Jiri WordPress iji mepụta ọrụ ọrụ ntanetị ebe ndị ahịa nwere ike biputere ma chọta ọrụ dị mfe. Saịtị WordPress dị mfe iji jikwaa ma hazie.
9. Ebe a na-edebe ihe ọmụma na weebụ
Mepụta mkpokọta foto site n'inwe WordPress iji nwee mkparịta ụka Girama na Pingraphy na saịtị gị. Bulite foto na ebe obibi gị na-ezuteghi mmezi ihe.
10. Ahịa ụlọ ọrụ
Họrọ site na isiokwu dịgasị iche iche na edemede maka saịtị WordPress gị ma jikwaa ndenye ihe iji kwado nkọwa ịzụ ahịa gị.
11. Ebe nrụọrụ weebụ
WordPress na-arụ ọrụ dị mkpa n'ebe ịga nke ọma nke blog weebụsaịtị. Okpokọta saịtị nwere ike ịmepụta site na onye ọ bụla dị njikere ịnweta ebe nrụọrụ weebụ.
12. Ụlọ ọrụ weebụ na magazin
Ime ka ndị na-agụ akwụkwọ maka ndị ọbịa na ndị ahịa nwere ike ịchọta ọdịnaya gị bụ ihe niile dị mkpa mgbe ị na-ekepụta weebụsaịtị na magazin. Saịtị WordPress na-enye ndị nta akụkọ ohere ikwusa ozi ọma dị elu.
WordPress bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị ahịa na ndị nta akụkọ na-arụ ọrụ n'ịkwọ ụgbọala na ebe nrụọrụ weebụ ha. WordPress nwere oke isiokwu, plugins, na edemede ịhọrọ site. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ịmepụta mkpokọta, WordPress bụ nhọrọ kachasị mma ịtụle.